Metadata.io: Gharia Pipeline Generation maka ABM | Martech Zone
Metadata.io: Gbanyụọ Generation Pipeline gị maka ABM
Wednesday, June 3, 2020 Wednesday, June 3, 2020 Douglas Karr
Metadata bụ usoro kwụ ọtọ nke nwere ike ịkwalite mgbasa ozi mmekọrịta gị na dijitalụ iji nyere gị aka ịmepụta ngwa ngwa na paịpụ sitere na akaụntụ gị.
Ihe omuma ha nke AI na ihe omuma nke igwe na-enyocha ihe omuma CRM nke oma iji mata onye kwesiri ihu mgbasa ozi gi, mgbe ahu, ihe nyocha nke otutu di iche iche na anwale otutu ndi di iche ma kwalite ihe kacha enye nsonaazụ kacha mma. Nsonaazụ bụ pipeline dị mma site na akaụntụ echepụtara emepụtara ngwa ngwa.
Metadata.io Platform Demo na Isi
Chọpụta na Ebumnuche - Chọpụta ahịa gị ụtọ ntụpọ. Wulite ndị mmadụ site na iji teknụzụ, ebumnuche ndị zụrụ ahịa, igwe ọkụ, ngwa ahịa, na isi mmalite data CRM. Tonweta profaịlụ kọntaktị ijeri 1.2.
Ntinye aka na nnwale - Nnwale ma mụta ihe n'ọtụtụ. Metadata's AI na-ewe ọtụtụ narị ule, yabụ na ịgaghị! Gosiputa ngwakọta arụmọrụ kacha mma nke ihe okike, ndị na-ege ntị na nsonaazụ ndị metụtara akaụntụ gị.
Nweta ma tọghata - Chọpụta achọ, ebuli ka revenue, na ikwugharị. Arụ ọrụ, akuko njiri mara dabere na pipeline emepụtara, itinye aka na akaụntụ, pipeline dị adị na-emetụta, na ndị ọzọ.
The Metadata n'elu ikpo okwu na-akpaghị aka ọgaranya na-eduga tupu syncing ha na gị Marketing akpaaka ma ọ bụ CRM Platform, na-eme ka ihe kachasị ụzọ ndu ntụgharị ntụgharị na data dị elu.
Njikọ Leadsift na Metadata
Omume ụlọ-ọrụ na nso nso a abụrụla ihe ịma aka na-atọ ụtọ maka ndị na-ere ahịa Digital nke na-adabere na teknụzụ nkewapụta adreesị IP site na ndị ọbịa na-amaghị aha na ụlọ ọrụ ha, mana adreesị IP ụlọ anaghị esite na njirimara ụlọ ọrụ ha. Nke a na - eme ka o sie ike ịrụ ọrụ nke ọma na mkpọsa ABM, nke bụ ihe kacha mkpa maka ndị ahịa B2B.
LeadSift ekwuputala usoro mmekọrịta na MetaData.io iji nyere ndị ahịa B2B aka ịgba ọsọ mgbasa ozi dijitalụ na-enweghị ịdabere na IP Matching.
Iji akara ebumnuche sitere na LeadSift, ndị ahịa Metadata nwere ike laser-lekwasịrị ndị na-azụ ahịa anya site na listi akaụntụ ha lekwasịrị anya site na iji njirimara dịka adreesị ozi-e, nke bụ ụzọ kachasị dị irè iji lekwasịrị ndị ọkachamara B2B anya ka ha na-arụ ọrụ n'ụlọ ọtụtụ oge.
Gil Allouche, Onye isi ọrụ Metadata.io
Site na akara ngosi ọhaneze LeadSift - ndị na - ere ahịa nwere ike ibute listi akaụntụ ha na kọntaktị ha ngwa ngwa, wee bịakwute ha na akpaghị aka site na iji usoro ihe eji achọ ngwa ngwa nke Metadata, ha niile na-adabereghị na adreesị IP dabara.
Akwụkwọ ngosi nke Metadata.io
Tags: abmbọmbụCRMndị na-ege ntị na facebookfirmographicọdịda pageedu ọgbọLinkedInndị na-ege ntịahịametadata.iopipelinendị ahịaere ahịa crm
Facebook Ebibila nkwanye ugwu na nkwanye ugwu… na Emechara m
TestFlight: iOS Beta Testing na Nyochaa App Live